ग्याster्ग्स्टर, सहयोगी, आपराधिक, भगुवा र लेखक। | वर्तमान साहित्य
एलेक्स मार्टिनेज | | जीवनी, लेखकहरू
जोसे जियोवन्नी द्वारा फोटो।
इतिहास भर मा हामी जहाँ मामलाहरु छन् केही लेखकको आफ्नै जीवनले कुनै साहित्यिक काल्पनिकतालाई पार गर्यो तिनीहरू आफैंले, वा अरूले सिर्जना गरेको हुन सक्छ। जीवनको लेखकको प्रोटोटाइपबाट धेरै टाढा हटाईएको थियो घण्टा घण्टा आफ्नो सृजनको स्थानमा कैद, कुनै खराबीबाट टाढा र केवल संस्कृति र साहित्यमा केन्द्रित।
तार्किक ढ ,्गले लेखकहरूले यस किसिमका जीवजन्तुहरू छन् जुन मानवताले दिएका छन्, मैले स्वीकार्नु पर्दछ कि यो आदर्श होईन, यद्यपि हाम्रो समाजको विचारधारामा यो छवि व्यापक छ।
जे भए पनि, मलाई लाग्छ कि त्यहाँ केही लेखकहरू छन् जसको जीवन र व्यक्तिगत इतिहास थियो जस्तै कोर्सिकन मूलका फ्रान्सेली जोसे जियोभन्नी। जीवन लाई कट्टर मानिन्छ के प्रति विरोधी त्यो लेखकको, जुन आफ्नो अस्तित्वको लागि, दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यमा एउटा युरोपमा हत्या, सहयोग, चन्दा र अपराधमा संलग्न थियो।
होसे जियोवानी, सर्वप्रथम, उनी जून २२, १ 22 २1923 मा पेरिसमा जन्मेका थिए र उनका आमाबुबा मूल रूपमा कोर्सिका टापुका थिए र उनलाई जोसेफ दामियानीको नाममा बप्तिस्मा दिए। जुन त्यसकारण उसको वास्तविक नाम र थर थियो।
जब फ्रान्समा हिटलरको III रेखले कब्जा गरे, जवान जियोभन्नी जसले गन्ती गरे १ 17 बर्षको उमेरमा उनले आफ्नो आपराधिक करियर सुरु गरे जुन जर्मन कब्जा र त्यसपछिका वर्षहरूमा चलेको थियो। त्यसकारण उनी गुंडाको समूहमा सामेल भए जुन पेरिसको छिमेकको छ Pigalle.
यस ब्यान्डका सदस्यहरू जस्तै हाबेल डामोस एकै समयमा टुक्राहरूको कोगव्हील भित्र थिए गेस्टापो ग्यालिक देश मा आफ्नो शाखा मा जर्मन। यसैले, "ककपिट" यो कसरी हो यस पक्षलाई गेस्टापो उनले अपराधी समूहबाट लाभ उठाए जसमा जियोभन्नी अन्यसँग थिए, ओगटेको जनसंख्या बीच आफ्नो प्रभुत्व बढाउन। यस कारणले गर्दा, यी समूहहरूले आफ्ना "कुप्रथा" लाई पूर्ण दण्डहीनताको साथ जारी राख्न "मार्क प्याटेन्ट" प्राप्त गरे।
सबै सदस्यहरू यस तरीकाले जर्मनहरूको सहयोगी भए र पनि, धेरै, सतावटको जिम्मेवार थिए कट्टरपन्थी, यहूदी वा सरकारको विरोध गर्ने व्यक्तिहरू। यी अस्पष्ट र जटिल वर्षहरूमा जियोभन्नी सबै प्रकारको ब्ल्याकमेल र कम्पनी मालिकको हत्यामा भाग लियो स्टोरलाई हाम कोहेन भनिन्छ। जे भए पनि, सबैभन्दा कुख्यात अपराधमा भाइ जुल्स र रोजर प्यूजिओतको जबरजस्ती चन्दा र हत्या थियो.
१ 1945 in1948 मा भएको यो दोहोरो हत्याको लागि र यसको अनुसन्धानको क्रममा १ XNUMX XNUMX, मा, पक्राउ गरियो र मृत्युदण्ड सुनायो। उनको भाग्यले उनलाई निश्चित रूपमा गिलोटिनमा पुर्‍यायो भन्ने तथ्य हुँदाहुँदै पनि उनी यस्तो विनाशकारी भाग्यबाट भाग्न सफल भए किनकि फ्रान्सेली संविधानको धारा १ of को आवेदनमा राष्ट्रपति भिन्सेन्ट अउरोल, उनको मृत्युदण्डको सजाय बीस बर्ष जबर्जस्ती गरिएको थियो.
तैपनि, हाम्रो नायक, कैदीको रूपमा आफ्नो बर्षहरूमा, उनी ला ला सान्ते जेलबाट टनेलको माध्यमबाट भाग्ने आश्चर्यजनक प्रयासको पनि एक हिस्सा थिए जसले अन्ततः उनलाई जेलबाट उम्कन दिएन।। एक पटक जेलबाट बाहिर निस्के र जबर्जस्ती श्रम गर्ने उसको सजायको कारण, उनले नर्मन्डीको समुद्री तट र त्यसका वरपरका क्षेत्रहरूमा हिटलरको तथाकथित अटलान्टिक पर्खालका खानीहरू सफा गर्दै थिए।
यो उनको विश्वास पछि यो समयमा थियो, writing 33 वर्षको उमेरमा जब उनले लेखकको रूपमा भूमिका खेल्न शुरू गरे “Le Trou ", उनको पहिलो उपन्यास अन्य कैदीहरू संग पलायन प्रयास मा ठ्याक्कै आधारित छ। चाखलाग्दो कुरा के हो भने, यो आफ्नै वकील हो जसले यस पुस्तकलाई अन्तमा सम्पादन गरे।
तिनीहरूले यो प्रारम्भिक पुस्तक अनुसरण गरे: "क्लासि टस रिसस्क", "l'Excommune"र" Le Deuxième Souffle »"। ती सबै, "Le Trou" को साथ, ठूलो पर्दामा पनि ल्याइएको थियो। यस कारणले, सबै कुरा भनिन्छ, उसले सातौं कला को दुनिया मा एक पटकथा लेखकको रूपमा पहिलो चरणहरु थियो, यस प्रकार एक बहुभाषी लेखक बन्न।
जीवनको अन्तिम वर्षहरूमा फ्रान्सका जेलहरूमा रहेका युवा कैदीहरूलाई उनीहरूको पुनर्संरचनामा उनीहरूलाई विश्वस्त गराउन र प्रोत्साहित गर्न उनले आफूलाई समर्पण गरे भविष्यमा अपराधको बाहिर सम्भव छ भनेर देखाउनको लागि आफूलाई उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्दै।
जियोभन्नी निश्चय पनि आफ्नो समयको शिकार भएका थिए र त्यस्तो समयको लागि जब युद्धमा राजनैतिक र सामाजिक अस्थिरता थियो, धेरै पुरुषहरूलाई हाम्रो समयमा अकल्पनीय वा अनुमति दिन नसकिने चरममा पुर्‍यायो।
त्यसकारण, जियोभन्नीको विगतको लागि उसको आलोचना गर्न थाल्नु उचित हुँदैन, यद्यपि तर्कसंगत रूपमा उसले जे गरे त्यो निन्दनीय छ। यसको विपरीत, म यो कुरा मनपराउँदछु कि यो अत्यन्त सम्मानजनक जीवन वास्तवमै सम्मानजनक साहित्यिक कार्यको कारण हुन सक्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » लेखकहरू » ग्याster्ग्स्टर, सहयोगी, आपराधिक, भगुवा र लेखक।
धेरै राम्रो लेख। मैले जियोवन्नी पढेको छु र मलाई यो मनपर्‍यो। म तपाइँको अन्तिम वाक्य संग रहन्छु।
नमस्कार मारियोला, मलाई यो पनि धेरै मन पर्यो। सत्य यो हो कि मलाई लाग्छ कि हामीसँग त्यहि साहित्यिक स्वादहरू छन् हग अँध्यारो।
ठिक छ, तिनीहरू धेरै समान छन्, हे, हे ...
अल्बर्टो फर्नांडीज डियाज भन्यो
मैले तपाईको बारेमा केहि पढे पछि यो लामो समय भएको थियो। धेरै चाखलाग्दो लेख। मलाई यो चरित्रको अस्तित्व थाहा थिएन। चलचित्र वा उपन्यासबाटको जीवन, पूर्ण सत्य। साहित्यिक क्षेत्र छोड्दा पनि त्यहाँ मानिसहरू पनि छन् जसको जीवन सिनेमा र लिखित कार्यको लागि योग्य हुनेछ र जुन कसैलाई वा प्रायः कसैलाई थाहा छैन।
मलाई थाहा थिएन कि गेस्टापोले फ्रान्सेली नियन्त्रणमा राख्न आपराधिक गिरोहको फाइदा उठाए (र म दोस्रो विश्वयुद्धको लागि उत्साहित छु)। मलाई शंका छ कि केहि मानिसहरु लाई थाहा छ। डरलाग्दो र धेरै बisted्गाइएको, तर दुबै पक्षहरूको लागि धेरै फाइदाजनक। घृणित मानिसहरू।
हो, यो जोसे जियोभन्नी जस्ता प्रोफाइल भएको व्यक्तिको लागि आफूलाई पुन: सम्मिलित गर्नु असामान्य हुँदैन। र धेरै कम सामान्य हो कि उसले आफूलाई लेख्नको लागि समर्पित गर्दछ।
हेरौं कि म उनका किताबहरूमा आधारित चलचित्रहरू हेर्न सक्दछु (मलाई लाग्छ तिनीहरू राम्रो हुनुपर्छ) र ती मध्ये केही पढ्दछु।
Alberto Fernández Díaz लाई जवाफ दिनुहोस्